AHOANA NO HAMONJENA IREO FIZARANA AO AMIN'NY UTORRENT REHEFA MAMADIKA WINDOWS? - RENIRANO - 2019
Avy amin'ny taratasy nalefa tamin'ny e-mail.
Hello Alefaso azafady, avereno ny Windows OS indray, ary ny antontan-taratasiko ren'ireo programa tao Utorrent dia nanjavona. izany hoe Izy ireo dia eo amin'ilay tabilao, saingy tsy ao anatin'ny fandaharana izy ireo. Tsy ampy ny raki-drakitra noforonina, mampalahelo izany ankehitriny, tsy misy na inona na inona hizarana, hianjera ny sanda. Lazao amiko ny fomba hamerenana azy ireo? Misaotra mialoha.
Eny tokoa, olan'ny olo-maro mpampiasa ny programa malaza Utorrent. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka ny hiatrika izany isika.
1) Zava-dehibe izany! Rehefa manamboatra Windows ianao dia aza kasihina ny sasantsasany izay misy ny rakitrao: mozika, horonan-tsary, lalao, sns. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manana fiara eo an-toerana D: Raha toa ka ao anaty rakitra D ireo rakitra dia tokony ho eo amin'ilay lalana mitovy amin'ny disk D rehefa avy nametraka ny OS. Raha manova ny taratasy fiatoana mankany amin'ny F - rakitra dia tsy hita ...
2) Mialoha Save the folder located in the following path.
Ho an'ny Windows XP: "C: Documents and Settings Alex Application Data uTorrent ";
Ho an'ny Windows Vista, 7, 8: "C: Users Alex appdata roaming uTorrent "(tsy voatanisa, mazava ho azy).
izay Alex - username. Hanana izany ianao. Azonao atao ny mamantatra, ohatra, amin'ny fanokafana ny sakafo fanombohana.
Toy izao ny fampiasana ny solonanarana eo amin'ny efijery mivezivezy amin'ny Windows 8.
Tsara indrindra ny mamonjy ny lahatahiry mankany amin'ny arivoarivo mampiasa ny archiver. Ny arisiva dia azo soratana amin'ny USB flash drive na kopia amin'ny sasantsasany amin'ny disk D, izay matetika tsy misy format.
Zava-dehibe izany! Raha tsy najanona ny Windows, dia azonao atao ny mampiasa ny raki-panavotana na USB flash, izay mila mamorona mialoha, na amin'ny hafa, ny solosaina miasa.
3) Avereno ny programa Utorrent rehefa tapitra ny OS.
4) Ankehitriny kopy ny lahatahiry voavonjy teo aloha (jereo ny dingana 2) mankany amin'ny toerana nisy azy teo aloha.
5) Raha efa vita tanteraka ny zava-drehetra, uTorrent dia hanitsy ny fizarana rehetra ary hahazo indray ny horonan-tsary, mozika ary rakitra hafa.
Ity dia fomba tsotra. Azonao atao, ohatra, ny manamboatra azy io, ohatra, amin'ny fametrahana programa ahafahana mamorona tahirin-drakitra sy antontan-taratasy ilaina. Na amin'ny famoronana ny executable BAT manokana. Saingy heveriko fa tsy misy teboka manoloana an'io, Windows tsy naverina naverina matetika fa sarotra ny manandraky ny takelaka iray na tsia ... Na tsia?